CompanyHub: Barnaamijka CRM ee Ganacsigaaga Yaryar | Martech Zone
Khamiista, Noofembar 3, 2016 Sabtida, Janaayo 14, 2017 Douglas Karr
Iyada oo la adeegsanayo qaab-dhismeedka iyo caqabadaha hortaagan horumarka madasha, waxaan aragnaa dhulal badan oo badan oo suuqa ku garaacaya. CompanyHub waa ganacsi yar oo CRM ah oo labadaba fudud oo karti u leh qiima jaban sidaa darteed waxaad u baahan tahay oo keliya waxaad u baahan tahay.
Marka laga reebo muuqaalka dhuumaha iibka, CRM loo adeegsaday iibka waxay bixisaa awood u si otomaatig ah dabagal ah:
CompanyHub waxay bixisaa tan waxayna leedahay astaamaha soo socda sidoo kale:
Maamul adiga Web si uu u hoggaamiyo beddelaad
Wuxuu ka caawiyaa hagaajinta iibkaaga geedi socodka.
Raadinta Email aan xadidnayn iyo qasabadaha xiriidha ka Gmail.
Boostada boostada leh raadinta Email.
La socoshada otomaatiga ah talo soo jeedin, sidaa darteed waligaa ma waayi doontid hogaamin.
xoogbadane Dashboard iyo Warbixinnada Customka
Maamul Xigasho iyo Amarro oo si toos ah ugu soo dir xigashooyinka nidaamka.
Isku day CompanyHub Bilaash
Tags: baabuur dabagalemayllada iibka badanCompanyhubCRMsoo gudbinta caadada CRMGmailraadinta gmailamaradaxigashadadashboardka iibkadhuumaha iibka